Yaa mudan in uu hello?
Ganacsiyada ka shaqaynaya qaybta wax-soosaarka taas oo si Xooga Loo Xanibay ama La xiray kuwaas oo xanibaadoodu aanay ka khafiifin inta u dhaxeysa talaabada 1aad iyo tan 2aad ‘ How we work ’ khariidada.
Liiska qaybaha xaqa u leh oo dhan waxaa laga hellaa websaytka Ganacsiga Fiktooriya ( Business Victoria website ).
Ganacsiyada ka hellay deeqda Licensed Hospitality Venues grant program xaq uma laha inay hellaan deeqda barnaamijkaan.
Immisa weeye deeqda barnaamijkan?
Ganacsiyada mudnaanta leh oo lacagbixintoodu gaarsiisan tahay $10 milyan ayaa heli doona.
$10,000 haddii lacagbixintooda sanadeed gaarsiisan tahay $650, 000
$15,000 haddii lacagbixintooda sanadeed dhan tahay $650,000 ama in ka yar $3milyan
$20,000 haddii lacagbixintooda sanadeed u dhexayso $3 milyan ilaa $10 milyan.
Sidee ayey kuwa hellaya deeqda u kharajgaraynayaan lacagta?
Deeqda waxaa laga yaabaa in lagu caawiyo ganacsigaaga si:
Wax kaga qabashada qiimaha qalabka, mushaharka ama ijaarka;
Raadinta dhaqaale, talo sharci ama talo lagu caawiyo ganacsiga qorshayntiisa socodkiisa hawsha;
Horumari ganacsiga iyada oo la samaynayo suuqgeyn iyo hawlaha isgaarsiinta; ama
Xarakaad kasta oo lagu kaalmaynayo oo lana xiriira hawlaha ganacsiga.
Waa maxay cadaynta dalbadayaashu u baahan yihiin inay bixiyaan?
Nambarka Ganacsigaaga Australiya (ABN), kaas oo ay waajib tahay in lala xiririyo Australian and New Zealand Standard Industrial Classification (ANZSIC) oo ganacsigaaga asaasiga ah
Magaca ganacsigaaga hadda ah oo diiwaangashan, halka looga baahan yahay, ee xeeriyaha dawlad goboleedka ama qaranka, sida Guddiga Maalgelinta Damaanad qaadyada Australiya (Australian Securities and Investment Commission (ASIC), Guddoomiyaha Faaiido-madoonka iyo Deeqaha Australiyaanka (Australian Charities and Not-for-profits Commissioner).
Nambarkaaga Shaqada ee Workcover (WorkCover Employer Number (WEN) ama, haddii ay tahay weli in ay bixiyaan WorkSafe, WorkSafe Application Reference Number (WRN). (ACNC) or Consumer Affairs Victoria (CAV).
Shaqa-Ilaaliyahaagii ugu dambeeyey ee Risiitka Macluumaadka Ganacsiga ee Bilaha ah Aqoosiga Isqorida (Enrolment ID) ee uu sameeyey Xafiiska Taxation-ka ee Australiya (Australian Taxation Office) muujiyaha ganacsiga.
Macluumaadka diiwaanka ABN kaaga iyo diiwaangelintaada la xiriirta sharciyeeyaha waxaa waajib ku ah inuu cusboonaysiiyo mar walba waqtiga dalabka.
Sidee loo dalbadaa
Dalabyadaada waa in la buuxiyaa laguna soo gudbiyaa websaytka Ganacsiga Fiktooriya (Business Victoria website)
Dhamaan su’aallaha ku jira dalabka waa in la dhamaystiraa dukuminti kasta oo la codsadayna waa in lagu lifaaqaa si loo xaqiijiyo in lagu qiimayo mudo kooban iyo deeqbixinta.
Dalbadayaashu waa inay ka markhaanti kacaan inay buuxiyeen shuruuda xaq u yeelashada ayna doonayaan inay sii ganacsadaan marka xanibaada la qaado.
Macluumaadka kasta oo dalabka ku yaalla oo la ogaado in uu been yahay ama marin habaabin, deeq kasta oo la siiyey dalbadaha waan in dib loo celiyaa dalabka Xukuumada Fiktooriya.
Ilaa intee qaadanaysaa in meel mariyo dalabka?
Waxaan doonaynaa in aan meel marino dalabyada oo aan ogeysiino dalbadayaasha natiijada shan berri gudahood. Laakiin dib u dhac ayaa laga yaabaa inuu dhaco haddii dalab u uku qoran yahay macluumaad aan sax ahayn ama dukuminti.
Goorma ayaa dalabku xidhmayaa?
Dalabyadu waxay xidhmayaan marka dhamaan lacagaha la qoondeeyo ama 11:59 daqiiqo ee fiidnimo taariikhdu markay tahay 23da Nufeembar 2020, hadba tan soo hormarta.
Xaggee ka heli karaa macluumaad intaas ka badan ama caawimo si aan u buuxiyo dalabkayga?
Macluumaadka intaas ka badan iyo kaalmo, fadlan wac khadka Ganacsiga Fiktooriya (Business Victoria) oo ah 13 22 15. Haddii aad u baahan tahay turjubaan, wac TIS National oo ah 131 450 weydiina khadka Ganacsiga Fiktooriya (Business Victoria) oo ah (13 22 15).
Macluumaadkii ugu dambeeyey oo ku saabsan coronavirus (COVID-19) oo ku qoran (Soomaali). Gal www.coronavirus.vic.gov.au/Somali
Ma jiraan barnaamijyo kale oo ganacsiga lagu kaalmo oo?
Xukuumada Fiktooriya barnaamijkeeda U-adkaysiga Ganacsiga Isku-xiran ( Business Resilience Package ) waxaa ka mid ah barnaamijyo kaalmo oo kale oo ganacsiga kuwaas oo ay saamayn ku yeesheen xanibaadyo la sameeyey si hoos loogu dhigo fiditaanka coronavirus (COVID-19), kuwaas oo ay ku jiraan ganacsatada kelid ah iyo ganacsiga martigelinta ee laysanka leh.
Ganacsiga Fiktooriya ee Coronavirus (COVID-19) macluumaddka ganacsiga ee bogga ayaa isaguna bixiya macluumaad kaalmo kale iyo macluumaadyada ganacsiyada.